Degso Euro Truck Simulator 2 Speed Patch loogu talagalay Windows
Degso Euro Truck Simulator 2 Speed Patch
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (4.2 MB)
Degso Euro Truck Simulator 2 Speed Patch,
Euro Truck Simulator 2 Speed ​​Patch waa balastar aad u faaiido badan oo bilaash ah oo loo diyaariyey xallinta arrinta xadka xawaaraha, taas oo laga yaabo inay ugu dhib badan tahay ETS 2 ciyaartoy. Euro Truck Simulator 2, oo ah jilitaanka baabuurta ugu caansan adduunka, ayaa ay qaddarinayaan ciyaartoydu iyagoo uga mahadcelinaya garaafyada iyo faahfaahinta kale. Laakiin qaar ka mid ah faahfaahinta yar -yar ayaa dhibaysa ciyaartoy gaar ah, haddii aysan ahayn dhammaan ciyaartooyda. Tusaale ahaan, waxay noqon kartaa wax laga xumaado in ciyaartooyda xawaaraha ku hayaa aysan dhaafi karin 90 km saacadiiba baabuurkooda xadka xawaaraha ciyaarta awgeed. Waad ku mahadsan tahay balastarka loo sameeyay si looga gudbo tan, waxaad ku dhaafi kartaa 90 waddooyinka magaalada dhexdeeda baabuurkaaga.
Ka sokow dhaqsaha u socda, nidaamka bareegga ee lagama maarmaanka u ah inuu joojiyo baabuurka xamuulka ah ee ku socda xawaarahaan ayaa sidoo kale ku jira gudaha balastarka. Waa hagaag, haddii aad weydiinayso inta aan ku samayn karo gaadhigayga ka dib marka aan rakibo balastarka, waxaa habboon in jawaabta markiiba la yidhaahdo. Ka dib markii aad soo degsato balastarka, waxaad gaari kartaa xawaare dhan 300 km inta aad xamuulka ku sidato baabuurkaaga. Tiradani, oo aad ugu sarreysa baabuurka xamuulka ah, waa riyada ciyaartoy badan, in kasta oo ay tahay mid aan caadi ahayn.
Guji halkan si aad u soo dejiso Euro Truck Simulator 2 bilaash!
Ku rakibidda balastarka:
Waxay ku filnaan doontaa inaad geliso faylka balastarka ee la soo dejiyay C: \_ Users \_ ku qor magaca kombiyuutarkaaga halkan \_ Documents \_ Euro Truck Simulator 2 \_ mod galka galka dukumentiyada kombiyuutarkaaga. Markaa waxaad si dhaqso leh u isticmaali kartaa baabuurkaaga xamuulka ah adoo galaya ciyaarta.
Barnaamijyada La Xiriira: Degso Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Speed Patch Noocyada
Cabirka Faylka: 4.2 MB
Horumar: SCS Software